Contributor, Columnist » မြန်မာစာမြန်မာစကား – မောင်စွမ်းရည်	22
kai says: မြန်မာစာတတ်လှချေရဲ့ဆိုပြီး ကမ္ဘာအေးဗုဒ္ဓကျမ်းစာဌာနမှာဆိုလား ဝင်ပြီး အလုပ်လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတယောက်ကို “ဝလုံး” အကြောင်းပြောရင်း “ဝ” ကိုအသံဘယ်နှသံထွက်နိုင်သလဲ။လေးသံထွက်ပြပါလို့ပြောတော့ သူကရယ်တယ်။ ကဲ စာဖတ်သူကမြန်မာဆိုပါတော့ (ဝ)ကို ဘယ်နှသံထွက်ပြမလဲ။ဒီဂျာနယ်မှာဖော်ပြပေးပါ။ ဂုဏ်ပြုပါရစေ။
ဆိုတော့.. မှန်တဲ့သူကို ဒီနှစ်တွေ့ဆုံပွဲလုပ်ဖြစ်ရင်.. လက်ဆောင်ပေးမယ်လေ..။ ဖြေကြည့်ကြ..။ ကျုပ်လည်းအဖြေမသိ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2714
ကထူးဆန်း says: ၀
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဟုတ်တယ်ဆို .
naywoon ni says: ​စေ နဲ့ ​ဇေ
​ချောက်​နဲ့ ​ဂျောက်​ ​ကောပါဝူးလားဗျ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5027
Mr. MarGa says: သများ ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရော ဘယ်လိုသင်သလဲဟင်
သများ ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က ဘာတုန်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12396
ခင်ဇော် says: တညားး ဒို့ ဂဒေါ့
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ဝဆွဲ
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: ဝ
Ma Ma says: တော်လိုက်တဲ့ အူးမြောက်မြောက်
kai says: ဘဲဥ
ko six says: ဝလုံးက နည်းနည်းထူးခြားတာတော့ အမှန်ပဲ။
kai says: သူ့ထင်ရာတွေက.. တော်တယ်ဟ…။
အဂ္ဂမဟာ ပြောင်ကြီး says: . မြန်မာစာ မြန်မာစကား အကြောင်းတုန်း စပ်မိစပ်ရာ ဝင်ပြောရရင်
လုံမလေးမွန်မွန် says: ငင် . . . ဒါမိုး ကြားဖူးဘာဒယ်
ခင်ဇော် says: မြန်မာ သဒ္ဒါ နဲ့ အင်္ဂလိပ် သဒ္ဒါ ကို
ခုတော့ မေဂျာထဲတောင် သူက အမှတ်အနည်းဆုံးဆို ဝင်တာလားး မသိ မြန်မာသဒ္ဒါ ကို မရေလည်ရင် English Grammer ကို နည်းလမ်းမှန် ချဉ်းကပ်လို့ ကို မရတာတော့ အသေအချာ..
သင့်အရိပ် says: ကျနော် ငယ်ငယ်ကတော့… မြန်မာစာ/စကား ဆိုတာ…အလွန်တရာမှ…
ကျယ်ပြန့်နက်ရှိုင်းသော… တိကျသေချာပြီး ခမ်းနားသော ဘာသာစကားတစ်ခုအဖြစ် မြင်ခဲ့ဖူးတယ်။ စာတွေအတော်အတန်ဖတ်…ရေး…ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့…
သူ့ရဲ့ မပြည့်စုံ မကြွယ်ဝမှုတွေ… မတိကျ မသေချာမှုတွေ …စသည်ဖြင့်..အပြစ်များစွာ တွေ့လာရတယ်…။ အဲ့ဒီနောက်တော့… ပိုစ့်မော်ဒန် ဝါဒီများရဲ့ အယူအဆအရ…
ဘာသာစကားကို ဆန့်ကျင် တိုက်ထုတ်ပစ်လိုက်ချင်တယ်… ။ အထူးသဖြင့်…. ဆိုလိုချင်တဲ့အဓိပ္ပါယ်တိုင်းကို တိတိကျကျ ဖော်ပြနိုင်စွမ်းမရှိတဲ့ ဘာသာစကားတွေကို…
ကဗျာ / ဝတ္ထု ဖန်တီးလို့ မရဘူးလား….ဆိုတဲ့ မေးခွန်းဟာ ကျနော့်အတွေးထဲ မကြာခဏ ဝင်လာတယ်.. ….
အောင် မိုးသူ says: ၀
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: .“၀”အကြောင်းခုထိမသိကြသေးဘူးလား…အံ့ပါ့…သယံဇာတဖြင့်ကုန်တော့မယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14459
ရေးတော့.. ဝှေးစေ့… တဲ့..။ ဖတ်တော့.. ဂွေးဇိ တဲ့..။ ၀ က.. ဂ ဖြစ်သွားသတဲ့…။ တခု..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12168
သင့်အေးရိပ် says: ရေးတော့ ဝလုံး သုံးပြီး ဝှက် ထားတယ်
kai says: ရေးတော့ “၀ှက်”.. ဖတ်တော့.. “ဖွက်” ပေါ့…။
နောက်တခု.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 132
Kyi Lwin says: တင်ပေးထားတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီပို့စ်ကို ဖဘ မှာပြန်ရှယ်ချင်လို့ ကူးယူသွားပါပြီ။